Sida Loo Helo La-Taliyaha SEO | Martech Zone
Sida Loo Helo La-Taliyaha SEO
Wednesday, September 14, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Subaxaan waxaan taleefoonka kula jiray saaxiibkay oo shirkad ay ugu yeeraysay inay siiso adeegyo jaban oo Raadinta Raadinta. Wuxuu si qurux badan ugu riyaaqay fursadda, ugu dambayntiina wuxuu helay adeeg aad u wanaagsan oo isaga siin kara soo-gaadhista taas Highbridge kari lahaa… laakiin qayb yar oo ka mid ah kharashyada. Hadday sidaas fiicantahay, heck… waa laga yaabaa inaan isqorno!
Waxa ugu horreeya ee aan sameeyo markii qof ku farxo sidaas oo kale waa dib u eegis darajadooda mashiinka raadinta adoo adeegsanaya aalad sida Xeebaha. Waxaad ku arki doontaa natiijooyinka midigta. Si fudud haddii loo dhigo, natiijooyinkani waa kuwo laga naxo. Waxaan xayiray magaca shirkadda oo ku jirta kaalinta 4aad (ugh!) Iyaguna si fiican uma qiimeeyaan (3 ama ka sareeya) hal xilli!
Hal qoraal oo tan ah this Waxaan kugula talinayaa inaad ka fiirsato bog sida Xeebaha sababta oo ah shirkadda aad raadineyso waxaa laga yaabaa in aysan ku qornayn ereyo aad u tartamaya sida "SEO". Highbridge, tusaale ahaan, waxay kuxirantahay shuruudaha laxiriira Warbaahinta Cusub suuqgeynta. Waxaan la qabannaa shaqo cajiib ah macaamiisheena si heer sare ah ugu kala sarreynay, laakiin taasi waa hal aalad oo ku jirta sanduuqayaga. Waxaan ognahay in a istaraatijiyad suuq-geyn ah kaas oo ka faa'iideysanaya dhammaan dhexdhexaadiyeyaasha ku habboon (oo ay ku jiraan SEO) ayaa si fiican u shaqeynaya. Si kastaba ha noqotee, shaki kuma jiro dib-u-eegista natiijooyinka raadinta ee aan dhab ahaantii ognahay waxaan sameyneyno.
La-taliyayaasha Raadinta Mashiinka Raadinta waa, laga yaabee, la-taliyayaasha ugu fudud ee warshadaha si loo xaqiijiyo aqoonsiyada… ha ka fogeyn mashiinka raadinta!
Laba Siyaabood oo Aad Waxtar u Leh Si Aad Ugu Kobciso Liiska Emailkaaga